Ole Gunnar Solskjaer ayaa ugu hanjabay Liverpool safarka ay ku tagayaan Anfield maalinta Axada, marka ay kooxdiisu seddex dhibcood ku hogaamiso hogaanka Premier League.
Manchester United ayaa hoggaanka la wareegtay bishii Janaayo markii ugu horreysay tan iyo 2013 markii ugu dambeysay hanashada Premier League.
Red Devils waxay ku riyooneysaa inay ku guuleysato horyaalka sideed sano ka dib, laakiin si ay u sii wadaan riyadaas, waa inay Liverpool ka horeysiiyaan oo ay garaacaan si ay lix dhibcood ugu soo baxaan.
Ole Gunnar Solskjær ayaa sheegay in guushii shaley ay ka gaareen Burnley iyo hogaankooda Premier League ee kala bar xilli ciyaareedkaan ay muujineyso inay mar kale gaareen hogaanka horyaalka. , ayaa tilmaamay inay seddexda dhibcood ka qaadan doonaan Liverpool.
Isaga oo ka hadlaya kulanka Liverpool, Solskjaer ayaa yidhi: “Waxaan rajeynaynaa inaan guuleysano, waan ku raaxeysaneynaa haatan, waxaana qaadaneynaa kulankaan kii ugu horreeyay ama kii ugu dambeeyay, taasina waa isbedel weyn.
“Laakiin waan ognahay inaan la ciyaareyno kooxda ugu fiican horyaalka lixdii bilood ee la soo dhaafay. Waa horyaalka haatan”.
Ole Gunnar Solskjær ayaa yidhi ”waxa ay noqon doontaa tijaabo weyn kulanka Liverpool”. Waxaan ku rajo weynahay (guul) waxayna noo noqon doontaa imtixaan markii aan halkaas aadno koox wanaagsan. “
“Waan sii fiicnaanaynaa,” ayuu yiri. Waxaan sifiican ugu ciyaarnay halkan gurigeena inta lagu gudajiray Kirismaska ​​laakiin dabcan waxay aheyd wax laga xumaado garoonkeena.
“Waxaan hada ku guda jirnaa xilli ciyaareedka, sidaas darteed tani waxay muujineysaa inaan joogno halka aan dooneyno inaan joogno, laakiin cidina ma xasuusato booska sidii ay aheyd Janaayo 12.
Manchester United ayaa badisay kaliya hal kulan seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee horyaalka.